China heck ba kiraro SS01G sy mpanamboatra | Eigday
1. Mitroka, mifoka rivotra, malaina haingana, manify matevina, mampiasa maodely fanamafisam-peo matevina manify.Soft Padded nohamafisiny ny voditongotra sy ny rantsan-tongotra ary ny fantsom-panafenana nohafanaina manampy ny hafanana amin'ny rantsantanana mba hampafana ny tongotrao amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
2. Ireo singa fanafanana fibre mitambatra, azo antoka kokoa ho an'ny tongotrao.
5. Ny ambaratonga fanaraha-maso mari-pana amin'ny ambaratonga telo dia afaka manitsy hafanana hafanana isan-karazany arakaraka ny tontolo iainana. LED mena dia ho an'ny mari-pana avo, fotsy ho an'ny mari-pana antonony, manga ho an'ny hafanana ambany.
6. Fampiharana: Trano an-trano, ary hetsika ivelan'ny trano: lasy, fihazana, jono ranomandry, bisikileta, bisikileta, bisikileta, hazakazaka, ski, snowboard ary fanatanjahan-tena any ivelany.
7. Serivisy avo lenta aorian'ny varotra.
● Ampidiro ny sarany - Fenoy tanteraka ny bateria alohan'ny hampiasana azy.
● Plug-in - Ampifandraiso amin'ilay bateria ao anaty paosy ny bateria.
● Miverina– Tsindrio lava ny 2 segondra mba hamelomana ny mpanara-maso.
● Gazety fohy 1 fotoana hanitsiana ny haavon'ny mari-pana
● Vonoina-Tsindrio lava ny 2 segondra mba hamonoana ny mpanera.
Ahoana ny fahafantarana ny batterie dia voampanga feno?
Ny hazavan'ny Charger Adapter dia mena: amin'ny famahana;
Mazava ny jiro Charger Adapter: Voasedra tanteraka.
(Adiny 3.0-3.5 eo ho eo vao voadidy tanteraka ny bateria 2pcs)
Torolàlana momba ny fanasana:
Esory ny batery rehefa manasa ba kiraro.
Ny fanasana tanana dia asaina hisorohana fiarovana bebe kokoa.
Raha tsy maintsy manasa milina dia asaina mampiasa kitapo kitapo.
Teo aloha: Saron-tànana voafafa azo ampiasaina amin'ny batterie ary fonon-tànana miakatra nohafanaina
Manaraka: Ba kiraro nanafana SS02B